Maitiro ekuita iyo iPhone kuverenga kuverenga zvinonzwika | IPhone nhau
Dzimwe nguva, chero chikonzero, isu tingangoda yedu iPhone kutiverengera rugwaro. Semuenzaniso, kuisa bhuku uchifamba kana kuteerera kune chinyorwa chekuteedzera panguva imwe chete. Pane zvikonzero zvakawanda. Imwe yacho, chokwadika, ndeyevanhu vane maziso asingatarise. Apple yakagamuchira yakanaka kwazvo mhinduro mune izvi. Muchikamu chino tichatsanangura maitiro ekugadzirisa yako iPhone kuti uverenge iwe magwaro pane imwe nguva. Sezvandinogara ndichitaura, iri nyore maitiro, asi iyo iwe yaunofanirwa kuziva.
1 Maitiro ekuita iyo iPhone kuverenga kuverenga zvinonzwika
1.1 Verenga sarudzo
1.2 Verenga Screen
Tiri kuenda General.
Takatamba pa Accessibility.
Tiri kuenda Voz.
Isu tinoshandisa "Verenga sarudzo" uye "Verenga skrini".
Isu takamisa kasi Kuverenga.
Inesarudzo: mukati me «Manzwi» tinogona kusarudza zvese mutauro wezwi uye kana tichida kuti mhando ive nani kana kwete. Iyo yakagadziridzwa Spanish inogara 147mb yatichafanira kurodha pasi.
Zvino zvatave nazvo kuti zvigadziriswe, ngatione maitirwo azvo kuti averenge zvinyorwa kwatiri. Tichava nenzira mbiri dziripo.
Iyi sarudzo inoshanda mune chero chishandiso chine chinyorwa chatinogona kusarudza, senge Mail, Notes kana mamwe mapeji ewebhu. Zvatinofanira kuita zvinotevera:
Isu tinosarudza iwo mavara aunoda.
Isu tinofamba tichienda kurudyi uye tichiridza "Izwi".
Panguva iyoyo, izwi raSiri rinotiverengera rugwaro urwu. Ichaverenga isu zvese zvatakamaka neblue.
Iyi nzira yakauya neIOS 8. Kana sarudzo ikamiswa muzvirongwa, tichava nechiratidzo chitsva chinowanikwa pane chero skrini. Kuti uite iyo, ingo tsvedza zvigunwe zviviri kubva kumusoro kusvika pasi peiyo iPhone. Tichaona kuti menyu inoonekwa ine zita rekushandisa, hamba uye tsuro (kumhanya) uye kutamba / kumbomira kutonga. Kana minwe miviri yatsvedza, iPhone yedu ichatanga kuverenga zvese zvirimo pachiratidziri. Kana tichida, tinogona kutarisa pachiratidziri kuti tione kwazvinoenda. Izwi rauri kuverenga richava rebhuruu.
Kana isu tiri wechipiri tisina kubata hwindo rakaonekwa, tichaona kuti rakadzikiswa, richisiya poindi yakafanana neiyo yeAssiveive Touch, asi nemuseve uye nhema.
Mune mafomu akaita seSafari, zvakakodzera kuti ushandise iyo "Reader". Muverengi ndiwo maronda anoonekwa kuruboshwe rwe URL. Kana isu tikamisikidza muverengi, iyo mifananidzo uye yekuwedzera zvinyorwa zvinonyangarika, zvichitisiira isu chete zvakakosha zvinyorwa uye mifananidzo Kana isu tikasaita muverengi uye tikamukumbira kuti averenge webhusaiti yese, ichaverenga ese mamamenyu uye izvo zvinoita kuti tirasike.
Verenga skrini inosiyana neIzwiOver mukuti yechipiri ichaverenga zvachose zvese paiyo iPhone skrini. Iyo yakagadzirirwa kunyanya kune vanhu vane zvakakomba maonero ekuona uye ichaverenga mazita eiyo Springboard kunyorera, semuenzaniso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuita iyo iPhone kuverenga kuverenga zvinonzwika
Aeneid Alicea akadaro
Pindura kuna Eneida Alicea
Diego moran akadaro
Facebook haivhure uye inopunzika
Pindura Diego Moran
Alex Del Rey akadaro
Usashandise, chinja mashandiro ekubata.
Pindura kuna Alex Del Rey
Bryan maque akadaro
Inoshanda chaizvo, ini ndaisatomboziva kuti iyo iPhone yaigona kuzviita
Pindura Bryan Maque
huauuu !!!! Kana ichishanda kwazvo. WAZVIITA.
Astrid miranda akadaro
Ndingaigadzirise sei kuti ndikwanise kukiya yangu iPhone uye nekuichengeta ichiverenga zvinyorwa?
Pindura kuna Astrid Miranda
Solution kumatambudziko e20% uye "vatyairi havana kuwanikwa" kana uchiisa TaiG jailbreak 2.0.